XOG:- Musharax kale oo durba la saadaalinayo inuu buuxiyo booskii uu baneeyay Gudoomiye Dhooba-Daareed. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Previous articleDeg-deg:- Gudoomiyihii Baarlamaanka Puntland oo hadda xilkii qasab looga xayuubiyay iyo Xiisado kataagan Garoowe.
Next articleDAAWO:- Siduu udhacay Weerarkii xalay lagu qaaday Xarunta Baarlamaanka Puntland “Gudoomiye Dhoobo Xaguu joogay xilligii Rasaastu socotay?”.
Wadani November 7, 2019 At 8:24 pm
Damiir laawe iga dheh marka hore Suldaanimo oo quraafaad bey ahayd ha iga harto sharaf iyo dadnimo.
Garaad, Suldaan, Boqor waa magacyo dadnimada xumida jirta lagu qarinaayo.